Sweden oo lagu amaanay soo dhaweynta qaxootiga | Somaliska
Agaasimaha qeybta yurub ee hay’ada UNHCR Vincent Cochetel oo Sweden booqasho ku yimid ayaa wadanka ku amaanay sida wanaagsan ee ay u soo dhaweeyaan soo galootiga. Isaga oo booqday xafiisyada Laanta Socdaalka (Migrationsverket) ayuu sheegay in wadamada Sweden iyo Germany ay qaateen masuuliyada ugu weyn ee qaabilaada qaxootiga.
Waxa uu intaas ku daray in UNHCR ay doonayso in wada shaqeyn wanaagsan ay yeeshaan wadamada Yurub oo la qeyb sado qaxootiga ka soo qulqulaya wadanka Syria.
Vincent Cochetel ayaa Sweden ku amaanay in ay leedahay nidaam qaxooti oo wanaagsan isla markaana ku dhisan cadaalada.
Sweden ayaa sanadkaan 2014 iska dhiibayaan qaxooti ka badan 80 000 qof halka sanadka soo socda la filayo in tiradaas ay kor u dhaafto boqol kun. Laanta Socdaalka ayaa cabasho joogto ah ka muujisay qulqulka qaxootiga oo hada si dardar leh u qoraysa shaqaale cusub.
Sidee Soomaalida u saameynayaa heshiiska qaxootiga ee Turkiga iyo EU?
Laanta Socdaalka oo soo bandhigtay aragtideeda Soomaaliya